Ny fizotran'ny famokarana granulation feno sy isan-karazany dia iray amin'ireo tombony lehibe amin'ny Henan Zheng Heavy Industries. Manana traikefa amin'ny fandrindrana sy ny serivisy amin'ny tsipika famokarana zezika isan-karazany izahay. Tsy ny rohy fizotry ny fizotran'ny famokarana ihany no ifantohanay, fa koa ny mahatakatra ny antsipirian'ny fizotrany tsirairay amin'ny tsipika famokarana iray manontolo ary hahatratra ny fifandraisan-davitra. Manome vahaolana feno sy azo antoka famokarana mifanaraka amin'ny tena ilain'ny mpanjifa izahay.
Ny tsipika famokarana granulator kapila dia ampiasaina indrindra hamokarana zezika mitambatra. Amin'ny ankapobeny, ny zezika mitambatra dia misy otrikaina roa na telo farafaharatsiny (azota, phosforus, potasioma). Izy io dia manana ny mampiavaka ny atiny mahavelona be ary vitsy ny voka-dratsiny. Ny zezika mitambatra dia mitana andraikitra lehibe amin'ny zezika voalanjalanja. Tsy afaka manatsara ny fahombiazan'ny zezika fotsiny izy io, fa mampiroborobo ihany koa ny vokatra azo sy avo lenta. Ny tsipika famokarana granulator disk dia vahaolana tsara hanatratrarana zezika zezika avo lenta sy avo lenta. Ny tsipika famokarana dia afaka mamokatra zezika NPK, zezika DAP ary potika zezika hafa.
Akora azo ampiasaina amin'ny famokarana zezika mitambatra
Ny akora ampiasaina amin'ny famokarana zezika mitambatra dia urea, amonium klôro, amonium sulfate, amoniaka ranon-javatra, mononium amôniôma, fôfatô diômônia, potasiôma klôro, potasiôma sulfate, ao anatin'izany ny tanimanga sasany sy ny mpameno hafa.
Ny tsipika famokarana granulator disk dia mandroso, mahomby ary azo ampiharina, matevina ny firafitry ny fitaovana, avo ny automation, tsotra ny fandidiana, ary mety amin'ny famokarana zezika zezika.
1. Ny fitaovana rehetra dia vita amin'ny akora miady amin'ny harafesina sy mahatohitra.
2. Ny fahaizan'ny famokarana dia azo ahitsy arak'izay takian'ny mpanjifa.
3. Tsy misy fandefasana fako telo, fitsitsiana angovo ary fiarovana ny tontolo iainana. Mihazakazaka hatrany izy io ary mora tazonina.
4. Ny tsipika famokarana zezika mitambatra dia tsy vitan'ny famokarana zezika mitambatra avo sy salantsalany ary ambany, fa koa mamokatra zezika organika, zezika anorganika, zezika biolojika, zezika andriamby, sns. Avo ny tahan'ny granulation.
5. Ny firafitry ny tsipika famokarana iray manontolo dia feno, siantifika ary mitombina, ary mandroso ny teknolojia.
Ny fitaovana famokarana ny granulator kapila dia misy trano fitehirizana entana → mixer (fangaro) → granulator disk (granulator) → milina sieve amponga (manelanelana ny vokatra tsy mifanaraka amin'ny vokatra sy ny vokatra vita) → crusher rojo (mamaky) → milina fonosana mandeha ho azy (fonosana) → conveyor fehikibo (fifandraisana amin'ny fizotra maro samihafa) sy fitaovana hafa. Mariho: ity tsipika famokarana ity dia ho an'ny referansa ihany.
Ny fizotry ny fizotran'ny tsipika famokarana granulator dia matetika no azo zaraina ho:
Voalohany indrindra, zarao amin'ny laoniny ny akora. Ny akora fototra dia misy urea, nitrate ammonium, amonium chloride, amonium sulfate, amonium phosphate (amonium phosphate, diammonium phosphate, calcium monophosphate, calcium carbonate), potassium chloride, potassium sulfate, sns.
Ny zoro kapila an'ny masinin-tsolika kapila dia mandray rafitra arofenitra, ary ny tahan'ny famoronana baolina dia mety hahatratra 93% mahery. Taorian'ny nidiran'ny fitaovana tao anaty lovia granulation, tamin'ny alàlan'ny fihodinana tsy tapaka ny kapila granulation sy ny fitaovana famafazana, dia mifamatotra miaraka ilay akora mba hamokarana sombina miaraka amina endrika sy endrika tsara tarehy. Ny granulator kapila dia fitaovana tena ilaina amin'ny tsipika famokarana zezika mitambatra.
Ny fonosana no dingana farany amin'ny tsipika famokarana zezika. Ny vokatra vita dia fonosina amin'ny milina famonosana automatique tanteraka. Ny diplaoma avo lenta sy ny fahombiazan'ny avo lenta dia tsy vitan'ny hoe manatratra fandanjana marina, fa koa mamita tsara ny fizotrany farany. Ny mpampiasa dia afaka mifehy ny hafainganam-pandehan'ny sakafo ary mametraka ny masontsivana hafainganam-pandeha mifanaraka amin'ny tena takiana.